DHEGEYSO-Xukumo lagu ridey maxaabiistii dagaalkii Suuj iyo Garacad. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Xukumo lagu ridey maxaabiistii dagaalkii Suuj iyo Garacad.
Seteembar 20, 2016 2:36 b 0
Garoowe, Sep 20 2016–Maxkamada ciidamada qalabka sida dowladda Puntland ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday maxaabiistii Alshabaab ee lagu hayay xabsiga dhexe ee garowe, kuwaas oo aan horey maxkamad loosoo taagin.
Xeer ilaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida Puntland Cabdkariin Xasn Firdhiye ayaa saxaafada u sheegay in la xukumay 28 kamid ah Shabaabkii dadoodu u dhexeysay 18 jir iyo 15, kuwaas oo lagu riday xukuno u dhexeeya 15 ilaa iyo 20 sano oo xarig ah.
DHEGEYSO-Soomaaliya oo maanta ka jawaabaysa dacwadaha badda ee Kenya.